RASMI: FA-ga England oo ganaax dul dhigay macalinka kooxda Liverpool Jurgen Klopp – Gool FM
RASMI: FA-ga England oo ganaax dul dhigay macalinka kooxda Liverpool Jurgen Klopp
(Premier League) 04 Dis 2018. Xiriirka kubada cagta dalka England ee FA-ga ayaa si rasmi ah u shaaciyay in uu ganaax dul dhigay macalinka reer Germany ee kooxda Liverpool Jürgen Klopp, kadib saameyntii uu ku yeeshay kulankii lasoo dhaafay ee Merseyside derby.
FA-ga dalka England ayaa ku ganaaxay macalinka reer Germay ee Jurgen Klopp aduun dhan £ 8,000, sababa la xriira dabaal dagii waalida ah uu ku dhex sameeyay gudaha garoonka, kadib goolkii ka dhashay waqtiga dhimashada ee ciyaarta kooxda Everton.
Jurgen Klopp ayaa lagu eedeeyay inuu aqlaaq xumo ku dhex sameeyay gudaha garoonka daqiiqadii 96-aad kulankii Merseyside derby ay wada ciyaareen kooxaha Liverpool iyo Everton, kadib goolkii uu dhaliyay Divock Origi.
Gudiga anshaxa ee xiriirka kubada cagta dalka England ayaa waxay Klopp u jeediyeen eedeyntan maalinkii shalay, kadib marka uu gudaha u galay garoonka.
si kastaba Liverpool ayaa ku garaacday deriskooda Everton daqiiqadihii ugu dambeesay ee kulankii Merseyside derby ee ka dhacay garoonka Anfield, kaasoo ka tirsanaa kulamada 14-aad ee horyaalka Premier League.
ARAG: Safafka ay Habeen dambe ku soo gali karaan Man United iyo Arsenal...(Xiddig Muhiim ah oo ka maqan Gunners iyo Mourinho oo wayn doona Laacibiin badan)